Xiaomi – AsiaApps
တောက်ပတဲ့ ကာလာနဲ့ဒီဇိုင်းကို ဖော်ပြသွားတဲ့ Xiaomi Mi Play ရဲ့ တရားဝင် ဓာတ်ပုံများ
December 24, 2018 MoonSmartphone NewsNo Comment on တောက်ပတဲ့ ကာလာနဲ့ဒီဇိုင်းကို ဖော်ပြသွားတဲ့ Xiaomi Mi Play ရဲ့ တရားဝင် ဓာတ်ပုံများ
Xiaomi Mi Play ဟာ Waterdrop notch ဒီဇိုင်းနဲ့ ကုမ္မဏီက ပထမဦးဆုံးထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ ဖုန်းဖြစ်ပါတယ်။ Mi Play ရဲ့ ပုံရိပ်တွေက တရားဝင် ချမပြခင်ကတည်းက Weibo ပေါ်မှာပျံ့နှံ့ နှင့်ပြီးပါပြီ။ အခု…
All-in-one Mi remote!
November 13, 2018 minn2unReviewsNo Comment on All-in-one Mi remote!
လုပ်ငန်းဆောင်တာများစွာကို ပြီးမြောက်အောင် လုပ်ဆောင်ရာမှာ စမတ်ဖုန်း တစ်လုံးရဲ့ ပါဝင်မှုဟာ ပိုပြီး ကြီးမားလာပါပြီ။ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးမှာ လုပ်ဆောင်ချက်များစွာ ပါဝင်ပေမယ့် လုပ်ဆောင်ချက်တိုင်းကို အသုံးမပြုဖြစ်ကြပါဘူး။ ဖုန်းခေါ်ဆိုတာ၊ မက်ဆေ့ချ်ပို့တာ၊ သီချင်းနားထောင်တာ စသဖြင့် လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုသာ အသုံးပြုကြတာ များပါတယ်။…
ပထမဆုံး Snapdragon 8150 နဲ့ ထွက်ရှိလာနိုင်ဖွယ်ရှိတဲ့ Xiaomi Mi 9
November 8, 2018 MoonSmartphone NewsNo Comment on ပထမဆုံး Snapdragon 8150 နဲ့ ထွက်ရှိလာနိုင်ဖွယ်ရှိတဲ့ Xiaomi Mi 9
မကြာသေးခင်က Slider ဒီဇိုင်း အသစ်၊ quad cameras နဲ့ Xiaomi Mi MIX3ကို တရုတ်ပြည်မှာ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ Xiaomi Mi MIX3ကို စတင်…
November 8, 2018 minn2unReviewsNo Comment on Xiaomi သုံးတဲ့သူတွေအတွက် Click တစ်ချက်တည်းနဲ့ အဆင်ပြေစေမယ့် Google Installer
Xiaomi ဖုန်းတွေကို Global Edition နဲ့ China Edition ဆိုပြီး နှစ်မျိုးထုတ်ပါတယ်။ Global Edition ဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ဖြန့်ချီဖို့ ရည်ရွယ်ပြီးထုတ်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် G-apps (Google Play Store,…